Tulobuterol HCL budada (56776-01-3) Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
Tulobuterol HCL (56776-01-3) waa halis beta2-adrenergic agonist. Tulobuterol wax saameyn ah kuma lahan cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha waxayna aad u xulashada murqaha tracheal. Waxaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo calaamadaha sida neefsashada neefsashada oo ay keento xannibaadda hawada ee neefta neefta, boronkiitada, cudurada joogtada ah ee xannuunada ah (COPD) iyo emphysema.
Talobobarol HCL (56776-01-3) video
Tulobuterol HCL (56776-01-3) Sharaxaad
Tulobuterol HCL (56776-01-3) waa halis beta2-adrenergic agonist. Tulobuterol wax saameyn ah kuma lahan cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha waxayna aad u xulashada murqaha tracheal. Waxaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo calaamadaha sida neefsashada neefsashada oo ay keento xannibaadda hawada ee neefta neefta, boronkiitada, cudurada joogtada ah ee xannuunada ah (COPD) iyo emphysema. Dhibaatooyinka halista ah ee la ogaadey waxay ahaayeen: hoos u dhaca, hoos u dhaca iyo hoos udhaca heerka potassium.
Tulobuterol HCL (56776-01-3) Smamnuucista
Magaca Kiimikada 2- (tert-Butylamino) -1- (2-chlorophenyl) hydrochloride
Fasalka Daroogada Beta2-adrenergic agonist reseptor
Molecular Wsideed 264.19
barafku Psaliid 159-164 ° C
Boiling Point 338.2 ° C at 760 mmHg
Storage Temperature 0 - 4 C muddo gaaban (maalmo ilaa toddobaad), ama -20 C mudo dheer (bilo)
Application Tulobuterol HCL waa halis beta2-adrenergic agonist.